Uma wanikezwa ukuba ube unkulunkulukazi wengane, khona-ke kudingeka ulungiselele kahle. Ku-christening, ungathenga isibhamu (isendwangu esinjalo, esikhiphe ingane ngemuva kwefonti), i-cap ne-lace, ihembe lokubhapathiza, ingubo. Njengomthetho, ukuthengwa kwesiphambano kanye nokukhokhwa kwezindleko kuthwalwa amahlombe kaNkulunkulu, kodwa lokhu kungenziwa futhi ngu-godfather. Isibonelo, ngokwezifiso ezithile unkulunkulukazi angenza isipho kumntwana ngezinyo zokuqala. Kungaba izingubo noma ithoyizi. Izipho zika-unkulunkulu akufanele zifinyeleleke, kodwa ngokubaluleka kufanele kube ngaphezulu kunezipho zabazali. Lokhu kuhlobene nomcimbi onjengomshado we-godson.
Amathiphu wokunikeza i-godsson
Isipho somshado ka-unina
Kuhle, uma unkulunkulu ethatha ingxenye kuzo zonke izenzakalo zika-godson, ngisho noma kungekho ngokuzibona kwakhe, izipho nokunaka. Ukubhapathizwa, izipho zendabuko ezivela esiphambanweni - izingubo zokubhapathizwa nesiphambano. Kodwa uma umama wengane ethengile konke okudingekayo ukuze ubhapathizwe, khona-ke ungakhetha izipho zokubhabhadisa, ucabange izifiso zabazali bomntwana, nganoma yikuphi isikhwama kanye nokunambitha.
Ekuvuseleleni ingane entsha noma umntwana kuze kube izinyanga ezingu-3 unganika i-albhamu yezingane noma uhlaka lwezithombe. Uma amazinyo ka-godson aqoshiwe, ibhokisi lezinyo lokuqala noma i-spoon yesiliva lizokwenza. Ngonyaka ka-godson, unganika isikhokhelo se-curl yokuqala, ukuze umama wengane agcine izinwele zokuqala zokusika.
Isipho esibucayi esivela ku-godparents bazoba isethi ye-silverware yezingane noma ngesimo sezinto ngabanye. Ungakhohlwa ukwenza umdwebo wegama lomfelokazi noma u-godson - njalo isipho esihle.
Ku-Christening emasikweni ase-Orthodoxy banikeza isithonjana, futhi kakade u-godson okhulile uzothola isipho esihle ngeBhayibheli labantwana ngezithombe. Isipho esiqinile nesibizayo sokwenza uKristu sizoba uhlelo lwesipho seBhayibheli esikhumba esibophezelayo noma isithonjana esiqanjwe esihlokweni sesiliva.
Isipho esifike ngesikhathi esifanele kumsikazi wesifazane yisongo noma amacici wezingane, futhi godson angakhetha inkumbulo yesiliva noma uchungechunge lwesiphambano.
Iningi lezingane libhapathizwa eneminyaka engama-1 ubudala, ekubhapathizweni isipho esihle sizoba ngesicathulo esincane noma isihamba ngezinyawo. Ngosizo lwabo, ingane izofunda ukuhamba, ukuthokozisa okunjalo kumntwana kuzozuza.
E-Epiphany, unganika izincwadi zezingane ngezithombe eziningi. Ingane izobabuka ngentshisekelo futhi izokhumbuza lesi sipho isikhathi eside.
Ukusiza izindleko zemali zabazali, izipho ze-Epiphany kufanele zikhethwe kanje: ungakwazi ukuthenga izingubo zomntwana. Umfana angakwazi ukuthatha ama-panties, nentombazane - ingubo enhle. Abazali bayothanda izipho ezinjengezindiza, isethi yamasevisi okugeza, ne-ryoshonki.
Ngokuvamile, izivakashi ku-christenings zivele zinikeze imali. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kuthatha umzuzu owodwa, uphula amasiko, kodwa ngakolunye uhlangothi kuyasebenza ngempela. Abazali bazokwazi ukuthenga ingane izinto ezifanele ezingenakuzulazula nxazonke.
Kungaba ngendlela yokunikeza ingane ubhapathizo "impepho" - isithombe esincane sokuzivikela se-Guardian Angel entanyeni yakhe, indawo yokuhlala kanye nesithonjana se-Guardian Angel yakhe. Ezinsukwini zakudala, isipho esingokomoya salowo mntwana kwakuyisithonjana esilinganisiwe, umphathi wakhe. Lesi sithombe sabhalwa ekukhuleni kwengane ebhodini elikhethekile, elibekwe eduze kombhede wengane ukuze akhulume ngokomoya noPhatron wakhe.
Unkulunkulukazi, okungenani ngezikhathi ezithile, kufanele ahambele uNkulunkulu wakhe, umkhumbule, unike amathoyizi, uthathe ingxenye ekhuthele empilweni yakhe, unakekele. Lokhu kuyisiko nomsebenzi ongcwele ka-unina. Kodwa abambalwa kuphela abenza lo msebenzi, abaningi bayawukhathalela, bacabange njengendlela engenalutho, ephutha ngokujulile, ngoba umuntu othembekile ngeke avumele ukungabikho nokungahloniphi kwemisebenzi yomuntu kulokhu okubaluleke kakhulu kwezenkolo.
Iminwe efriziwe: okufanele ukwenze
Indlela yokukhetha izipho zonyaka omusha zezingane?
Indlela yokuthola izimbungulu ziphuma efulethini
Ukulungele uNyaka Omusha ozayo
Izipho ezifiswayo intombazane ekhulelwe
Indlela yokugcina izingubo zihlanzekile ekamelweni?
Ama-seashell ane inyama enomnandi nama-sauce ushizi
Izinzuzo nezindleko zemvume
I-Blueberry Crème Brulee
Amafutha angcono kakhulu okuphulukisa ukulimala ngokushesha
I-pizza ne-broccoli, u-anyanisi neminqumo yama-black
Isitifiketi sokuvuthwa: i-wardrobe yowesifazane emva kweminyaka engama-30 ubudala
"I-Rusfond" idinga emndenini kaJeannene Friske ukubuyisela imali
Ukuhlelwa kokunyakaza kubuyela emuva kuDmitry Hvorostovsky
Ukunqunywa kwemvelo yokwenza
I-hora yeklasi yonyaka wesikole ka-1 kuNhlangulana 2016-2017 yiyona script yesifundo emhlabeni wonke ngezigaba ezahlukene. Izihloko zekilasi ihora leSuku lokuLwazi
I-Horoscope ye-Aquarius-Abesifazane ngo-Okthoba 2016
Izici zikazwelonke zesitayela zokugqoka
Manje i-Cinderella inekhethelo elihle lama-crystal izicathulo ezivela kubaqambi abahola phambili
I-biography yomdlali we-Leonid Kuravlev
Ukunciphisa amandla - amandla ocansi kanye nobuciko